यसकारण रोकियो माधव नेपालको भारत भ्रमण | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १८ मंसिर २०७६, बुधबार १४:४२ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौँ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेट्ने समय नमिलाएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमण रोकिएको छ । भारतीय राजनीतिक नेतृत्वसँग सिधा छलफलका लागि नेता नेपाललाई विशेष दूत बनाएर पठाउने निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।
केही समय अघि भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सभावेश गरेपछि नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ । त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिका विषय छलफल गर्न नेता नेपाल सरकारको विशेष दूतका रुपमा दिल्ली जाने तयारी गरेका थिए ।
भेटघाटकालागि दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रालय मार्फत समन्वय भइरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री मोदीको समय नमिलेका कारण नेता नेपालको दिल्ली भ्रमण रोकिएको ब्रिफिङ नेकपाको सचिवालय बैठकमा गरिएको छ ।
बुधबार बिहान पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको सचिवालय बैठकमा यसबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता नेपालले पछिल्लो प्रगतिबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।
‘सीमा विवादका विषयमा सिधा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाललाई भारत पठाउने निर्णय गर्नुभएको हो । नेपालले आफू जाने तयारी गर्नुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘तर, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भेट्ने समय मिलिसकेको छैन । उहाँको समय मिलाउने प्रयास भइरहेको छ । उताबाट समय मिले लगत्तै उहाँ दिल्ली जानुहुन्छ ।’
नेपाल–भारत सीमा समस्यामा राष्ट्रिय धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले कार्त्तिक २३ गते सर्वदलिय बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा सीमा विवादलाई कुटनीतिक तवरले हल गरिनुपर्ने नेताहरुले सुझाव दिएका थिए । त्यहि निर्णय अनुरुप प्रधानमन्त्रीले नेता नेपाललाई सिधा संवादका लागि दिल्ली पठाउने निर्णय गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री आफैं अस्वस्थ र मोदीले भेट्ने समय नमिलाएपछि नेता नेपालको भ्रमण रोकिएको हो ।
सीमा विवाद चर्किएपछि त्यसलाई लिएर भारत र नेपालका पूर्वपरराष्ट्रसचिवहरूले कडा प्रकृतिका अभिव्यक्तिहरू पनि सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
बुटवल । रुपन्देहीमा डेंगुका कारण १ को ज्यान गएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत बुटवल–११ नहरपुर निवासी ६१…
यौन सम्पर्क गर्दा यौनाङ्गको अवस्था कस्तो हुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् गोप्य कुरा…
काठमाडौं । यौन सम्पर्क गर्दा महिला पुरुष दुवैको यौनाङ्गहरु एक–आपसमा घर्षण गराइन्छ । यौनआनन्द लिने माध्यम नै विशेषतः यौन…
खाडीकाे सस्तो सुन नेपालमा छ्याप्छ्याप्ती !
काठमाडाैँ । लहानको मुख्यचोकस्थित एउटा चिया पसलमा सुन खरिदबिक्री भइरहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले एक महिलासहित तीनजनालाई नियन्त्रणमा लियो।
पहिल्यै बनाइएका घरलाई एकमुष्ट अनुदान
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भई प्राविधिकहरू खटिनुपूर्व बनाइएका निजी घरका घरधनीलाई एकमुष्ट तीनलाख उपलब्ध गराउने भएको…
दाङ । यहाँको घोराही उपमहानगरपालिका–१० लमडरुवा डाबरस्थित ऐलानी बस्तीको सानो झुपडीमा बस्ने एक वृद्धा आमाको संघर्ष र उद्यमशीलताको निकै…
शिवरात्रिमा नागा बाबाबाट हुने अश्लिलता रोक्न माग
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा शिवरात्रि पर्वका अवसरमा धर्मका नाममा नागा बाबाबाट प्रदर्शन हुने अश्लिलता रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर…
जुटमिल डुबाएर ६९ बिघा जग्गा हत्याउने षड्यन्त्रमा सभामुखदेखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसम्म5views